Rosia: Ilay Mpandeha Tsy Nanana Tapakila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 3:50 GMT
Ao Moskoa, azo vidiana any amin'ny mpamily 25 robla izay mitovitovy amin'ny 1$ ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka/trolleybus/tram. Mahazo fihenam-bidy ianao raha toa ka mividy ny tapakilanao eny amin'ny fivarotana manokana. Kanefa aleon'ny olona sasany manao hosoka sy mitaingina maimaim-poana. Fantatra amin'ny anarana hoe zayats amin'ny Rosiana: izany hoe bitro dia ny mpandeha tsy manana tapakila. Nitantara (RUS) ny zavatra hitany vao haingana raha nifanena tamin'io karazan'olona io ilay mpisera LJ kozenko monina ao Moskoa :
Tena tsy azoko ireny olona mitaingina maimaim-poana ny fitateram-bahoaka ireny. Ireo izay mitsambikina ny sakana ary miafina ny mpamily. Ary tena tsy takatry ny saiko mihitsy ny fiheveran'izy ireo ny tenany ho be herimpo. Ary raha mihoatra ny 12 taona ihany koa izy ireo, miala tsiny aho fa dia [tena mampivonto fo].
Raha nandeha trolleybus avy ao [ Dinamo] ho any [ Sokol] aho androany. Tsy feno ny antsasaky ny fiara fa ny tenako sy ny olona misotro ronono vitsivitsy no tao anaty fiara. Ary avy eo nisy olona mitovitovy taona tamiko niditra teo amin'ny varavarana fidirana , raha tsy mbola zokiko kokoa. Lava, manao palitao hoditra efa ratsiratsy sy pataloha sadika mainty mitsoriadriaka. Nandingana teo ambonin'ny sakana izy ary nivoretaka teo amin'ny seza tsy nisy nipetraka. Niala teo amin'ny familiana ilay mpamily, vehivavy fohy somary vaventy ary nilaza taminy fa raha tsy mandeha mivoaka izy dia tsy mihetsika eo ihany koa ilay trolleybus . Nanomboka nihomehy io olona io tamin'izay. Ary tsy nitsahatra nihomehy, toy ny hoe mifoka rongony.
Novohan'ilay vehivavy mpamily ny varavarana rehetra, nandeha nivoaka teny ivelany izy, nandrehitra sigara ary nanomboka nandehandeha manodidina teo. Lasa ny roa minitra. Nisy olondehobe misotro ronono iray, 70 taona eo ho eo, nitsangana niala teo amin'ny sezany ary nanantona an'ilay zayats, raha izay no azo iantsoana azy , nangataka azy hidina . Nitsahatra tamin'ny fihomehezana mihitsy aza ilay lehilahy: “Dadabe, [inona no hidiranao amin'izany]? Aza [manirikiry]? Mandehana ianao miverina eny amin'ny sezanao mipetraka, [mahatsiravina]. “Mbola namerina ny fangatahany ilay mpisotro ronono, nanomboka nihomehy i palitao mainty sy pataloha sadika. Niezaka nisintona ilay adalalahy tamin'ny sorony ilay zokiolona , nanilika azy anefa izy ka nanosika azy. Tamin'izay no nitsangana aho sy ny lehilahy zokiolona iray hafa .
Na izany aza, navoakanay tsotra izao tany ivelan'ny trolleybus ity lehilahy mihomehy amin'ny tsy misy dikany ity. Niverina teo amin'ny toerany ilay mpamily , nanakatona ny varavarana. Nifamptsiky izahay sy ilay zokiolona, rehefa nahatsangana fiarahamonim-pirenena, haha, nitohy ny dianay.